Iingcali zeMidiya yezeNtlalo kwiyadi yakho yangasemva! | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 19, 2008 NgeCawa, nge-13 kaJanuwari 2013 Douglas Karr
Imidiya yokuncokola lishishini eliqhuba ngoku, nokuba imeko yezoqoqosho ikukuphi. Ndiyakholelwa ukuba zintathu izizathu zoku:
Imidiya yokuncokola yindawo yokuzibandakanya ekunzima ukuyikhohlisa okanye ukwenza isiqingatha sedonki.
Imidiya yokuncokola yindawo engabizi kakhulu, efuna ixesha kodwa hayi uninzi lwezixhobo ezibizayo.
Imithombo yeendaba kwezentlalo yeyona ndlela iphambili yokufumana zombini (Iinjini yokukhangela ziyayithanda) kunye nokugcina (ukwenza unxibelelwano kunye nobudlelwane).
Uqhushululu kwimidiya yoluntu luye lwathandwa kakhulu kangangokuba ngoku luqala ukuvelisa iingcali zommandla. Aba bantu basebenze kwintengiso, ukuthengisa, kunye / okanye itekhnoloji ye-Intanethi iminyaka emininzi, kodwa baye batsibela kwimithombo yeendaba zentlalo kuba beqonda ukubaluleka kunye namandla. Nazi iingcali zengingqi ezintathu:
UKyle Lacy: Imidiya yokuncokola, Indianapolis
Apha e-Indianapolis, bendisebenza naye UKyle Lacy kunyaka ophelileyo okanye njalo. UKyle usebenze nzima ukuzenza le Ingcali yezeNtlalontle yengingqi. Yenza uphando nge Imidiya yokuncokola Indianapolis, Kwaye uya kufumana nokuba uKyle ubekwe # 1!
Ayothusi into yokuba uKyle enothando olungagungqiyo oluphakathi- uya kumfumana 24/7 ukwakha ubudlelwane Umhlobo, Incinci i-Indiana, nayo yonke enye indawo enokubakho kumnatha. Usebenza nabathengi kuwo onke amashishini apha edolophini kwaye uqhuba umdla wakhe kwintengiso ye-Intanethi kwisicwangciso ngasinye.
UJason Falls: Imidiya yokuncokola, eLouisville
KwiiMasters zeShishini ezikwi-Intanethi zamva nje, ndiye ndaya kwiseshoni kaJason yeQhinga leSocial Media: ukuthengisa kwiWebhu yeHlabathi ye-2.0. Indawo kaJason Imithombo yeendaba yeNtlalo yenye endikhe ndayilandela kangangexesha elithile. Kudala ndiceba ukwehla ndisiya eLouisville kangangexesha elithile ukubona uJason kodwa ikhona into ebisoloko isendleleni… Ndonwabile ukuba ekugqibeleni siza kudibana!
Ngelixa bendisebenza kwintengiso ethe ngqo, ukuthengisa iziko ledatha, kunye netekhnoloji yecandelo lentengiso kule minyaka ilishumi idlulileyo, uJason usebenze kwiCandelo lezoBudlelane noLuntu nakwicala lophawu lweshishini. Ndiyakonwabela ukufunda ibhlog yakhe kuba ngumbono endingawuzisi rhoqo etafileni. Qiniseka ukuba uyongeza Imithombo yeendaba kwi-Social Media Explorer kuluhlu lwakho lokufunda. Ngokuthetha noJason kumnyhadala, bendiwongekile ukuba naye ifunda ibhlog yam!
UMike Sansone: Imidiya yokuncokola, iDes Moines
UMike usenokuba ngoyena mntu ubalaseleyo kwimidiya yoluntu! Mna noMike besilandela ibhlog nganye iminyaka embalwa ngoku. Ibhlog yakhe, Ukuguquka ijolise ekusebenziseni iiblogi ukunceda ukuqhuba ishishini kunye noluntu.
Ngubani osemva kweyadi yakho?
Ukufumana ingcali yeendaba kwimimandla yoluntu kubalulekile kwishishini lakho. Ukuba ujonga ingeniso yakho kwaye uninzi lwengeniso yakho yeyasekhaya, kuya kufuneka ke ufumanise ukuba zinjani iingcali zengingqi. Banokukwazisa kwinethiwekhi nakwimibutho eya kuqhuba uninzi lwezithuthi kwishishini lakho, ikuncede ngemeko yeendaba zosasazo lwasentlalweni, kunye nokunxibelelana neziganeko zengingqi.
Ukuba uyingcali yeendaba zosasazo lwasentlalweni kwesinye isixeko okanye ilizwe, zive ukhululekile ukuba uphawule apha ukuba ungubani, uphi, kwaye ubalule ntoni. Mhlawumbi lixesha lokuba siqale isikhombisi sethu sengingqi?
tags: UJason uyawa
Oktobha 19, 2008 ngo-2: 26 PM
Andazi nokuba kungenxa yokuba ndingowaseKhanada okanye mhlawumbi kungenxa yokuba ndingazange ndizibize "njengengcali yemidiya yoluntu" apho kunzima ukuba ndizibize ngayo. Mhlawumbi kungenxa yokuba andazi ukuba ndingayichaza njani ukuba yintoni "ingcali yemidiya yoluntu"? Ukufunda iposti kaChris Brogan (http://www.chrisbrogan.com/what-i-want-a-social-media-expert-to-know/Ndingazichaza njengamntu mnye. Ukufunda ezinye izithuba ezivela kubantu obabhalileyo ndinokuthi ndiwele kolo luhlu, kodwa ndiyakuthanda ukugxila kwezinye iindawo nakumajelo asekuhlaleni. Mhlawumbi leyo ingaba yithuba lakho elilandelayo. Yintoni ingcali yemidiya yoluntu?
Okt 20, 2008 ngexesha 8:32 AM
Ndithobekile kukukhwaza eposini. Enkosi kakhulu ngesisa ondikhanyisele ngaso kunyaka ophelileyo. Ungamvumeli ukuba akhohlise, uDoug ungoyena mntu ukhokelayo kwiingcali zemidiya yoluntu eMidWest.
I-LGR: umxholo wokuba yingcali yezeMidiya yoluntu uvuleke ngokupheleleyo. Ndiye ndabelana ngeengcinga zam kwileta (piggybacking off of Brogan). Unokuba yi-adapter yokuqala okanye i-geuine adoptor.
Oktobha 20, 2008 ngo-2: 27 PM
Esi sisithuba esihle, kwaye kufuneka sisikhumbuze ukuba akufuneki siye “kwihlabathi liphela,” ngokuyimfuneko, ukuba nefuthe kwimidiya yoluntu. E-Austin, sithetha nabanini bamashishini malunga noko sikwenzileyo kunye nokubacebisa ngezinto ezenziwa ziimveliso zethu. Umzekelo wephulo langaphakathi lwengca yayiliPhulo lokugaya u-Facebook, apho wonke umntu wase-Bazaarvoice owayene-akhawunti ye-FB efikelela kwinethiwekhi yabo ngaxeshanye (sikonyuse kakhulu ukutyelelwa kwendawo kunye nokudluliselwa).
Kulungile ukwazi ukuba abantu bayasebenzisana ubuso ngobuso kunye nakwi-intanethi!
Oktobha 21, 2008 ngo-4: 41 PM
Ndiyayithanda imbono yolawulo lwengingqi. Nantsi enye indawo eviweyo: Miami, FL.
Ndiqhuba iMedia Media / iNew Media Consultancy eseMiami ebizwa ngokuba yi-Clearcast Digital Media. Ikhonkco lethu kukuba ngenxa yeminyaka yam eyi-15 + yamava njengomvelisi weTV, sikwenza zombini ividiyo kunye nomxholo wewebhu yeaudiyo. Ngamanye amagama, sinceda ukuqulunqa kwaye emva koko sivelise kwaye sihambise umyalezo wakho.
IMiami yintengiso ehlekisayo ethi, ngeendlela ezithile, ihlala ibonakala ililize emva kwelizwe lonke. Sele ndithethile, ndiyazibuza ukuba "liphi ilizwe" ngokubhekisele kwiinkampani ezijonge ngaphandle zoncedo lwe-SM.
Okt 22, 2008 ngexesha 9:11 AM
Ndiyayithanda imbono yolawulo lwengingqi. Nantsi enye indawo eviweyo; miami, FL.